Sawir-qaadayaasha Instagram-ka oo aadan ku dhaafi karin | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sawir-qaadayaasha Instagram ma tebi kartid
Iris Gamen | 03/04/2022 23:00 | Fanaaniin
Intee in le'eg oo naga mid ah ayaa ku qaatay saacado aan la tirin karin Instagram-ka, annaga oo eegaynay mashruucyo sawirro kala duwan. Ma aha oo kaliya habka waxyiga, laakiin sababtoo ah Waxaad Instagram ka heli kartaa shaqooyin iyo sawir-qaadayaal cajiib ah oo laga yaabo inaadan aqoonin.
Shabakadan bulshada, waxa ay noqotay bandhig aad u wanaagsan oo ay fanaaniin kala duwani ku soo bandhigaan sawir weyn oo ay ku muujinayaan waxqabadkooda. Xaaladdan oo kale, sawir-qaadayaashu waxay ku soo jiitaan isticmaaleyaasha sawirro lagu sameeyay farsamooyin kala duwan sida qalin, calaamadeeyayaal, buufin ama dhijitaal ahaan.
1 Sawir-qaadayaasha Instagram waa inaad raacdaa
1.1 Nuuria Diaz
1.3 Sanz iyo Vila
1.9 bahal spaghetti
1.11 Yuusuf A. Roda
Sawir-qaadayaasha Instagram waa inaad raacdaa
Dhammaan shabakadaha bulshada dhexdeeda, Instagram waxaa ka buuxa dad karti leh oo cajiib ah. Waxaad ka heli kartaa nooc kasta oo mashruuc ah oo lagu dhejiyay profiles, muuqaal, sawir, sawir, iwm. Oo tani waa waxa aan ka hadli doono xiga, oo ku saabsan sawir-qaadayaasha Instagram oo ay tahay inaad hore u ogaatid.
Goobta qaranka, waxaan muujineynaa sawirka sawir-qaadaha Nuria Diaz, oo leh dabeecad shakhsi ahaaneed oo ku jirta shaqadeeda. Sawirrada tan farshaxanku wuxuu leeyahay qaab fudud oo fudud, marka lagu daro isticmaalka midabyo soo jiidasho leh.
Laba-macno ayuu ka cararayaa tusaaleyaashiisa. Shaqooyinkiisa, wuxuu raadiyaa farshaxanka isagoo isticmaalaya waxyaabo yar oo garaafyo ah. Naqshaddeedu waxay xasuusineysaa kuwii hore, maadaama ay leedahay qaab dhaqameed taas oo u horseedaysa in ay kiciso dareenka diirimaadka.
Sawir-qaade reer Brazil ah, kaas oo uu la socdo sawirradeeda canabka ah waxaan aadi doonaa waqtigii 50-meeyadii. Waxay la shaqeeyaan qaab majaajillo ah oo guridda ah taasoo ay kaga hadlayso dumarnimada, arrimaha mudaaharaadyada iyo queer.
Shaqadeeda waxaan ku arki karnaa sida Jennifer, wuxuu muujiyaa muuqaallada dabeecadaha kalgacalka leh iyo sidoo kale waqtiyada gaarka ah. Si tan loo sameeyo, wuxuu isticmaalaa midabyo dhalaalaya marka lagu daro khadadka madow ee khuraafaadka ah ee majaajilada.
Sanz iyo Vila
Ku soo noqoshada panorama Isbaanishka, waxaan ka helnaa sawir-qaade ka yimid Alicante, Pau. Isaga qaabka, waxaa lagu aqoonsan yahay aragtida koowaad iyadoo la adeegsanayo midabada sida casaan, jaalle iyo buluug.
Waad ku mahadsan tahay jihadiisa, wuxuu awooday inuu la shaqeeyo noocyada kala duwan ee dhammaan qaybaha, laga bilaabo cabitaannada khamriga sida Beefeter ilaa noocyada sida Greenpace.
Fanaan ku dhashay kuna koray Hong Kong. Waad ku mahadsan tahay kaaga Sawirada majaajilada oo leh qaab gaar ah ayaa u horseeday inay noqoto fanaan tixraac ah gobolka.
Waxaa ka mid ah shuqulladiisa, waxaad ka heli kartaa mawduucyo kala duwan sida manga Japanese, dhaqanka Hong Kong, mawduucyada dumarka, iyo kuwo kale.
Laga soo bilaabo Texas, United States, waxaan ku soo bandhigaynaa tan Sawir-qaade adeegsada midabka iyo halabuurka shaqadeeda sinna qof kale ma jiro.
Sawiradiisa, naqshadaha naqshadaha iyo joometeriga ayaa lagu arki karaa. oo ka kooban halabuur aad u firfircoon. Habka uu u matalo dharka, dharka iyo walxaha ayaa si fudud u muuqda.
Ma aha oo kaliya in sawirka lagu qaadi karo warqad ama shaashado, waxa kale oo uu ka soo muuqan karaa taarikada dhoobada ah. Artefacto, oo ah labada ciyaaryahan ee Argentine kuwaas oo istuudiyaha ku yaal Madrid Waxay kugu waali doonaan naqshadahooda alaabta miiska.
Shaqooyinkiisa, way ka gudbi karaan qaabab sawir oo kala duwan oo hadhow ka muuqan doona walxaha dhoobada ah, oo leh ruux dhab ah oo dhammaystiran.
Waxa uu shaqadiisa ka bilaabay adduunka naqshadaynta garaafka, laakiin xidhiidhkaasi ma hirgelin maadaama waxa aadka u xiiseeyey uu ahaa sawir.
Iyada oo loo marayo sawirradeeda, farshaxanku wuxuu raadiyaa inuu bixiyo aragti wanaagsan oo madadaalo leh nolosha aan wajaheyno, oo markaas lagu gaaro dhoola cadeyn.
Waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah xirfadlayaasha adduunka ee horumarinta sawirada. Qoraaladiisa Instagram-ka, wuxuu ina tusinayaa tallaabo-tallaabo uu u abuurayo mid ka mid ah jilayaashiisa.
Iyada oo ku dhawaad ​​230 kun oo taageerayaal ku leh Instagram, akoontiga Spaghetti Monster iyada oo loo marayo daabacaadadooda, waxay nagu soo bandhigaan shaqooyin ay mararka qaarkood isku daraan fariimaha bulshada iyo kaftanka.
Waxay yihiin sawirada qaabka ugu yar, oo leh sawirro aad u fudud, qoraal badan oo mararka qaarkood ah iyo shakhsiyad gaar ah.
Iyada oo shaqo cajiib ah, waxaan kuu soo bandhigeynaa farshaxanimada Shiinaha Suzume Saki ee hibada leh. Shaqooyinkiisa, Waxaan ogaan karnaa tixraacyada qaababka kala duwan sida adduunka cyberpunk.
uu sawiro leh dabeecad dagaal badan, kaas oo laga dareemi karo kooxaha iyo meelaha jilayaasha la abuuray. Intaa waxaa dheer, midabadu waxay u adeegaan si ay u matalaan gardarradaas, shakhsiyaddaas.
Yuusuf A. Roda
Hubaal qaar badan oo idinka mid ah waad garanaysaan fanaankan, tan iyo markii la kaashaday shabakada bulshada ee Instagram si ay u naqshadeeyaan dhejiyeyaasha kibirka si ay ugu daraan sheekadooda. Intaa waxaa dheer, mashruuc kale oo si fiican loo yaqaan ayaa ahaa sawir-gacmeed uu ku sameeyay Suuqa Degmada Barceló, ee bulshada Madrid.
Waa farshaxan ay shaqadiisu noqon karto sawiro sawiro siman ah, xariiqyo, hawo dumar ah iyo midab badan.
Abuuraha nuxurka oo u shaqeeyay noocyo kala duwan oo caalami ah, sida Netflix ama Disney, iyo kuwo kale.
On profile kaaga Instagram Aynu aragno shuqulladiisa oo lagu sharraxay qaab aad u cajiib ah, midab leh iyo in waxaas oo dhan, waxay ina xusuusinayaan adduunka Disney.
Laba nin oo walaalo ah oo hal-abuur iyo kaftan meel walba ku soo bandhiga hawlahooda. Sawiradooda, waxay ku shaqeeyaan rajo tan iyo markii ay bilaabeen inay sawiraan caruurnimadooda ilaa ay ka furteen istuudiyaha u gaar ah Barcelona.
Ma aha oo kaliya inay ku nagaadeen dunida sawir-qaadista, laakiin sidoo kale Waxay la soo shaqeeyeen shirkado waaweyn waxayna wajahayaan mashruucyo ka socda qaybaha kale ee farshaxanka, sida farshaxanimada.
Ugu dambeyntii, waxaan kuu soo qaadaneynaa fanaanka Loish. Waxaa laga yaabaa in qaar badan oo idinka mid ah ay raaci doonaan isaga shabakadaha bulshada, tan iyo Waxa uu profile-kiisa ku leeyahay in ka badan 2 milyan oo taageerayaal ah.
Haddii aad jeceshahay adduunka tusaalaynta, Shaqooyinka Loish si fudud waa cajiib. Hal-abuurnimadiisa cajiibka ah, haweenka da'da yar ayaa u taagan inay wajahayaan xaalado kala duwan. Iyadoo loo marayo sheekadeeda, abuuruhu wuxuu muujinayaa sida ay u horumariso qaybo ka mid ah naqshadeynta.
La yaab maaha in ururintan sawir-qaadayaasha Instagram ay ku yaqaaneen wax yar. Waxaan rajeyneynaa inay ku dhiiri galiyaan ama ay si fudud ku qaataan saacado ku raaxaysiga abuurkooda cajiibka ah. Haddii aad taqaan wax sawir-qaadayaal ah oo ay tahay inaan ogaano, xor u noqo inaad ku qorto sanduuqa faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawir-qaadayaasha Instagram ma tebi kartid